WAR CUSUB: Manchester United Iyo Juventus Oo Ka Heshiiyay Inay Isku Bedeshaan Paulo Dybala Iyo Romelu Lukaku - Gool24.Net
WAR CUSUB: Manchester United Iyo Juventus Oo Ka Heshiiyay Inay Isku Bedeshaan Paulo Dybala Iyo Romelu Lukaku
Manchester United iyo Juventus ayaa heshiis hordhac ah oo ay isku bedelanayaan Paulo Dybala iyo Romelu Lukaku gaaray sida ay sheegtay Sky Sports qeybteeda Talyaaniga.
Sky Sports ayaa sheegeysa in haatan loo baahan yahay inay heshiis gaarraan Manchester United iyo Paulo Dybala si uu heshiis guud ahaantiisa u dhaqan galo.
Lukaku waa uu doonayaa inuu u wareego Juventus laakiin wakiilka Dybala oo ku sugan London ayaa weli wadahadal kula jira Unied waxaana uu heshiis u xayiran yahay in wadahadalkaas uu noqdo mid mirodhal ah.
Isagoo la hadlayay saxaafada ka dib kulankii xalay ee saaxiibtinimo ee ay Manchester United ka badisay kooxda reer Norway ee Krisiansund tababare Ole Gunnar Solskjaer ayaa diiday inuu ka hadlo Dybala laakiin waxa uu xaqiijiyay inay saxiixyo cusub ku dhow yihiin.
“Halkaan uma joogo inaan ka hadlo warar xan ah ama inaan ka hadlo ciyaartoyda kooxaha kale” ayuu yiri Solskjaer.
“Laakiin dabcan waxaan ka shaqeyneynaa inaan hal ama labo ciyaaryahan keeno sida aan hore u sheegay.
“Waxaa weli inoo harsan 10 maalmood kale ka hor inta uusan horyaalka bilaabanin, waxaana rajeyneynaa inaan ku dhawaacno waji cusub ama labo waji.”
Dybala oo dhaliyay 78 gool 182 kulan uu u saftay Juventus tan iyo markii uu kaga soo biiray kooxda Palermo sannadii 2015 ayaa la filayaa inuu ku soo laabto Khamiista tababarka kooxda Juventus madaama uu fasax dheeri ah ku maqnaa isagoo Argentina u ciyaaray tartanka Copa America